Booliiska iyo dhageysiga telefoonada | Somaliska
Dhageysiga telefoonada shacabka ee booliiska ayaa siyaaday sanadkii la soo dhaafay sida uu soo tabiyay Sveriges Radio. Labo jibaar telefoono ah ayay booliisku dhageysteen sanadkii 2009 marka loo barbar dhigo 2008. Sida warbixintu soo bandhigtay booliiiska ayaa dhageystay 1,161 telefoonka sanadkii tagey oo intooda badan la xiriirtay muqaadaraadka. Arne Andersson oo ka tirsan booliiska Qaranka ayaa sheegay in siyaadada dhageysiga telefoonada uu ka dambeeyo maadama dambiilayaashu ay isticmaalayaan moobeelada asagoo sheegay in dhageysigu uu sahlay dambi baarista. Ogolaanshaha dhageysiga telefoonada ayaa waxaa bixiya maxkamadaha si loola socda dadka looga shakiyo in ay ku jiraan dambiyo xabsigoodu gaaraayo 2 sano ugu yaraan.
Dhageysiga telefoonada shacabka ee booliiska ayaa siyaaday sanadkii la soo dhaafay sida uu soo tabiyay Sveriges Radio. Labo jibaar telefoono ah ayay booliisku dhageysteen sanadkii 2009 marka loo barbar dhigo 2008. Sida warbixintu soo bandhigtay booliiiska ayaa dhageystay 1,161 telefoonka sanadkii tagey oo intooda badan la xiriirtay muqaadaraadka.
Arne Andersson oo ka tirsan booliiska Qaranka ayaa sheegay in siyaadada dhageysiga telefoonada uu ka dambeeyo maadama dambiilayaashu ay isticmaalayaan moobeelada asagoo sheegay in dhageysigu uu sahlay dambi baarista.
Ogolaanshaha dhageysiga telefoonada ayaa waxaa bixiya maxkamadaha si loola socda dadka looga shakiyo in ay ku jiraan dambiyo xabsigoodu gaaraayo 2 sano ugu yaraan.